Ny sary sokitra nataon'i Anthony Howe | Famoronana an-tserasera
Ny zavakanto kinetika dia fironana iray misy ny asa na sary sokitra mihetsika na toa manana izany. Ity zavakanto kinetika ity tompon'andraikitra amin'ny famoronana ny fahatsapana ny hetsika miaraka amin'ny fiatraikany toy izany izay mety hanakorontana ny mpijery mandinika ny asa, fa izay amin'ny fifantohana amin'ny antsipiriany dia afaka mahita ny maodiny.
Octo II dia sary sokitra kinetika noforonin'i Anthony Howe izay mampiasa ny herin'ny rivotra mamerina ny hetsika ilaina hamokarana io fihetsika mihetsika optika tsara io. Asa kanto izay azon'ny maro dinihina avy lavitra koa satria afaka mamokatra hatsiaka kely noho ny endrika noforoniny.
Sary sokitra kinetika izay afaka manohitra rehefa mandeha ny fotoana hosorana sy diovina indraindray ary izany, ny ankamaroan'izy ireo dia noforonina tamin'ny vy vy. Octo II dia efa napetraka ao Greenville any South Carolina, Etazonia.
Sary sokitra kinetika izay, arakaraka ny hafainganan'ny rivotra, hihetsika haingana kokoa izy ary ho lehibe kokoa aza ny effet optique. Anthony Howe dia mpanakanto iray manao an'io karazana sary sokitra io ary manana traikefa lehibe amin'izany araka ny hitanao amin'ny tranokalany. Avy any indrindra no ahafahanao mametraka kaomandy amin'ireo asa asehony raha misy, toy ny amin'ny "Chief 2", "My Father Influence" na "Switchback".
Un mpanakanto vy tsy misy fangarony ary ireo polymère izay misy fangaro isan-karazany miaraka amina endrika hafahafa nefa manintona ny saina, indrindra rehefa mihetsika toy ilay aseho eto "Octo II" izy ireo.
Ny tranonkalanao is this, izay ahitanao ny sanganasany bebe kokoa sy ny fisian'ireo sanganasa voalaza ireo. ny hetsika kanto izay ny effets effets et ny rivotra dia mitaky lanja lehibe ho fitaovana hanakorontanana ara-tsaina antsika ary hamela antsika ho variana amin'ny hetsika mitranga amin'ireo sary sokitra manokana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Octo II dia sary sokitra kinetika noforonin'i Anthony Howe izay mihetsika amin'ny rivotra